PVC Leather Fekitori, Vatengesi - China PVC Leather Vagadziri
PVC, ipfupi nePolyvinylchlorid, ine mamwe matanda pasi pekupfeka kwayo. Chinhu chayo chikuru ndeye polyvinyl chloride, uye zvimwe zvinowedzerwa kuti zviwedzere kupisa kwayo kupisa, kuomarara, ductility. PVC zvakare ine simba rakakwira uye kugadzikana kwakanyanya, uye haina kupisa, inogona kudzivisa shanduko yemamiriro ekunze yakaunza ngura uye zvimwe zviitiko. Icho chinhu chakanakisa kwazvo, nekuda kwekuchengetedza kwazvo, saka inogona kuonekwa kwese muhupenyu.Muhupenyu hwezuva nezuva, akasiyana zvigadzirwa zveganda zvinoonekwa kwese kwese, sekushongedza kwemukati, machira esofa, zvemukati zvemota, zvipfeko, shangu nemabhegi zvichingodaro. Zvigadzirwa zvematehwe izvo zvakafanana chaizvo zvakagadzirwa zveyakagadzirwa nedehwe
0.25mm-3mm Breathable PVC Leather yeMotokari Yemukati Kugadziriswa
Chakagadzirwa PVC Leather Vegan PVC Leather Yemakwikwi Mutengo
Inofananidzwa nemamwe matehwe, PVC yeganda iri nyore kupurasitiki uye zvirinani kuchenesa, kazhinji netowel yakanyorova kana yakanyorova bepa tauro. Mazhinji ePVC ematehwe akagadzirwa naBensen arimo, ndapota taura nesu kana uchida rumwe ruzivo kana sampuli.
Fashoni Inofurika Mota PVC Leather Sheet Yakasimbwa Pamusoro
Kupfava Kunzwa Fake Leather PVC Chinyorwa cheMota Floor Mat muRoll
China Mugadziri Fake Leather PVC ye Auto Interiors
Ukobvu 0.7mm PVC Faux Leather yeCar Seat Chivharo Chinyorwa
Yakakwira Hunhu PVC Yakagadzirwa Leather yeMota Yemukati Kushongedza
Mota Zvikamu Kufukidza Chakagadzirwa PVC Leather Chinyorwa neMakwikwi Mutengo
54/55 Inch Width Synthetic PVC Leather yezvigaro zvemotokari
Yakasarudzika Faux Synthetic PVC Auto Leather yeCar Seat Chivharo